BUTROOS OO UGU YEEDHAY CIISE GURIGIISA!! – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on September 7, 2016 October 12, 2016 by Maroodiga
Kafarna’um waa magaalo ku taala dhinaca woqooyi ee badda Galiili. Ciise halkaas ayuu joogay, guriga Simoon Butroos. Simoon soddohdiisna wey xanuunsanayd markaasaa Ciise u tegey iyadii, oo gacanteeda qabtay oo soo toosiyey, qandhadii ayaa isla markii ka tagtay waxayna bilaabtay inay isla markiiba u adeegto ayaga (Markoos 1:31). Ciise waxaa ka dhex shaqeynayay xoogga illaah oo wuxuu sameeyey mucjisooyin. Oo wuxuu bogsiiyey dad buka.
Isla maalintaasba dadkii magaalada ku noolaa waxay ogaadeen wixii dhacay. Waxayna isug yimaadeen albaabka guriga Simoon Butroos (Markoos 1:33). Markaasay waxay u keeneen kuwii bukay iyo kuwii ruuxaanta iyo jinniyada qabayba si uu Ciise u bogsiiyo. Ciisena wuu bogsiiyey dhamaantood ,Ciise addeeggiisu aad buu caan u noqday oo dadkii wey fara bateen, dabadeetana wey adkayd in Ciise wax baro dad tiro badnaatooda awgood(Markoos 1:28, 37, 38, 45).
Maalintii danbe ayaa Simoon oo Butroos la odhan jiray u yeeray kuwa kale si ay Ciise u doon doonaan,wuxuu sida caadiga ah kici jiray xili hore si uu u tago meel xasiloon dabeedatana uu halkaas ugu dukado (Markoos 1:35). Wuxuu u dukaday aabihiisa jannada ku jirra,In wax kasta oo uu qabanaayo laga yeelo doonista illaah,Waa muhiim in lagu dukado sallaadaha meel xasiloon oo aan buuq lahayn.
Butroos markii dambe wuxuu helay Ciise, ” wuxuuna u sheegay in dadka oo dhan ay asaga Ciise ah ay doon doonayaan !”Waxa ay ahayd mid adag,inuu Ciise dadka la hadlo,waayo waxay doonayeen in Ciise ayaga u sameeyo calaamooyin badan (Markoos 1:37).
Ciise wuxuu ku yidhi, Ina keena aynu tagno tuulooyinka inoo dhow,si aan Injiilka ugu soo wacdino,Ciise marna ma baajin guul ama fursad uu ku wacdin karo meelo kale, umana uusan ogolaan in dad ay ku qanciyaan inuu la joogo,wuxuuna yiri waa inaan meel walba Injiilka ku wacdino (Markoos 1:38). “Taasi waa sababta aan u imid.” Sidaas ayay ku socdeen ayagu oo qayb ka mid ah Galili ayay sii dhex mareen Ciise ayaana ka qodbeeyey kulamadoodii, wuxuuna ka bixinaayay dadka ruuxaanta xun (Markoos 1:39).
Walaalayaal Ciise wuxuu ka jawaabay dadka baahidooda adeegiisa ugu horeeyey.
Haddaanahay kuwa asaga u adeegana awood ayaa Rabbigu nasiiyey aan dadka baahiyahooda ka jawaabno.
Rabbigu ha idin barakeeyo,oo kuwii Sayid Ciise Masiixi ku dayda Rabbigu hanaga dhigo.